अब प्रविधिमार्फत तौल घटाउनुहोस्, वैज्ञानिकले बनाए भोकै नलाग्ने डिभाइस « Nagarik Khabar
अब प्रविधिमार्फत तौल घटाउनुहोस्, वैज्ञानिकले बनाए भोकै नलाग्ने डिभाइस
प्रकाशित मिति : 11 January, 2021 8:55 pm
एजेन्सी । अमेरिकाका वैज्ञानिकहरुले मोटोपन कम गर्ने एक वायरलेस डिभाइस तयार गरेका छन् । यो डिभाइसले मोटोपनबाट पीडित मानिसहरुमा पेट भरिरहेको आभाष गराउँदछ । १ सेन्टीमिटरको आकार भएको यो डिभाइस अमेरिकाको टेक्सासस्थित ए एण्ड एम युनिभर्सिटीले तयार गरेको हो ।
यसलाई तयार गर्न लागिपरेका टिममा रहेका डा. सुङ्ग पार्कले डिभाइसलाई प्रत्यारोपण गर्नका लागि शरीरमा सानो छिद्र बनाई डिभाइस छिराइने र त्यसलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट कन्ट्रोल गरिने बताएका छन् । उनका अनुसार डिभाइसमा लगाइएको माइक्रोचिप र एलइडी लाइटले स्नायूमा पेट भरिरहेको आभाष गराउँदछ । यसका कारण भोक लाग्दैन । यसरी मोटोपन नियन्त्रण हुन्छ ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार डाइटिङ्ग र व्यायाम गर्दा पनि तौल नघट्ने र ग्यास्ट्रिक बाइपास सर्जरी गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका मानिसहरुमा यो डिभाइस प्रत्यारोपण गर्न सक्दछन् । यसले पाचन प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्दछ । यसको प्रत्यारोपण गर्दा हुने सर्जरी निको हुन लामो समय लाग्ने बताइएको छ ।
प्रो. पार्क भन्छन्, “दिमागबाट नियन्त्रण हुने स्नायूलाई डिभाइसबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म दिमागका साथै स्नायूहरुलाई पनि नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि यस्तो वायरलेस डिभाइस तयार भएको छैन । यो नै पहिलो हो ।” यो डिभाइस प्रकाशको माध्यमद्वारा दिमागसम्म पेट भरिएको सिग्नल पुर्याउने काम गर्ने डिभाइस तयार गर्ने प्रो. सुङ्ग पार्कको दाबी छ ।